खाना बनाउने, कार्ड बेच्ने अक्षय कुमार कसरी भए त सुपरस्टार ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
खाना बनाउने, कार्ड बेच्ने अक्षय कुमार कसरी भए त सुपरस्टार ?
आफ्नो जमानाका सर्बाधिक लोकपि्रय अभिनेता राजेश खन्नाका छोरी ज्वाई, अभिनेत्री ट्वींकल खन्नाकी जीवन-संगी भनेर पुच्छरमा ‘विशेषण’ झुण्डाइरहनु जरुरी छैन, अक्षय कुमारलाई चिनाउन । जब अक्षयको नाम लिन्छौं, उनको एकपछि अर्को सुपरहिट फिल्ममो सूची हामी फटाफट भन्न सक्छौं । किनभने यि ‘खिलाडी’ ब्वाईको खातामा दर्जनौ व्लकबस्टर फिल्महरु छन् ।
‘मै खिलाडी तु अनाडी’ ‘महरा’, ‘धड्कन’, ‘हेराफेरी’ ‘राउडी राठौर’, ‘हाउसफुल’ देखि अहिलेसम्मको यात्रामा उनले कहिले लभरब्वाइ त कहिले कमेडियन, कहिले जासुस त कहिले एक्सन हिरोको रुपमा आफुलाई खरो उतारिसकेका छन् । तर करियरको यो बिन्दुसम्म आइपुग्न उनले एकदमै उतारचढावपूर्ण यात्रा छिचोलेका छन् ।
एउटा रेष्टुरेन्टका सामन्य ‘वेटर’ कसरी बलिउडका सुपरस्टार बने त ? कथा रोचक छ । भनिन्छ, दैनिक २० हजार व्यक्ति कलाकार बन्ने सपना पालेर बलिउड नगरी मुम्बईमा पुग्ने गर्छन् । यस्तै भिडबाट आएका हुन्, अक्षय ।
अक्षयले बिगतमा खाना बनाउनेदेखि कार्ड बेच्नेसम्मको काम गरे । काम खोज्दै बंगलादेशको चक्कर मारे, कोलकाता धाए । कोलकातामा एक ट्रभल एजेन्सीमा काम पाए । तर, उनी धेरै समय त्यहाँ अडिएनन्, मुम्बई पुगे । मुम्बईमा गहना बिक्री गर्न थाले । काम खोज्ने सिलसिलामा उनी बैंककसम्म पुगेका थिए । त्यहीका एक रेष्टुरेन्टमा उनले वेटरको काम गरे । त्यहाँ उनले मार्शल आर्ट पनि सिके ।
जीवन गुजाराका लागि मुम्बईमा भौतारिरहेका अक्षय चर्चित फोटोग्राफर जयेशको सम्पर्कमा पुगे । जयेशले उनलाई आफ्नो साहयक बनाएर खटाए । त्यस क्रममा उनले लाइट उठाउनेसम्मको काम गरे । त्यसबेला गोबिन्दाको फोटोसुट गरिएको थियो । त्यही फोटो पुर्‍याउन अक्षय गोबिन्दकहाँ पुगे ।
फोटो बोकेर आएको अग्ला, हँसिलो, जोसिलो युवालाई देखेर गोबिन्दाले भने, ‘तिमी किन हिरो नबनेको ?’ त्यस जमानाका चल्तापूर्जा हिरोले ‘हिरो किन नबनेको’ भनेपछि अक्षयको मनमा हलचल पैदा भयो । उनले आफैलाई सोधें, ‘के म हिरो बन्न सक्छु ?’ अन्तत एक इन्स्िटच्युटमा अभिनय सम्बन्धी तालिम लिए । यो १९९० को कुरा हो ।
त्यहीबेला उनलाई एउटा फिल्मको अफर आयो । उनले फिल्म खेले । जब फिल्म रिलिज भयो, तब उनको रोल केवल ७ सेकेन्डको मात्र थियो । त्यही फिल्मको नायकको नाम अक्षय थियो । राजीव भाटियाले आफ्नो नाम बदले र त्यही हिरोको नाम सापटी लिदै आफ्नो न्वरान गरे, ‘अक्षय’ । १९६७ को सेप्टेम्बरमा भारतको अमृतसारमा जन्मिएका अक्षयको खास नाम राजीव हरि ओम भाटिया थियो ।
हिरो बन्ने आकंक्षाले उनी आफ्नो पोर्टफोलियो लिएर फिल्म स्टुडियोको चक्कर लगाउन थाले । तर, कतै सफलता हात लागेन । आखिरमा अक्षयको भेट एक मेकअप आर्टिस्टसँग भयो, जसलाई नरेन्द्र भनेर बोलाइन्थ्यो । त्यही नरेन्द्रले अक्षयको पोर्टफोलियो लिएर एक निर्देशककहाँ पुगे । भाग्यको ढोका यहिंवाट खुल्यो । अक्षयलाई एकसाथ तीन फिल्मको अफर मिल्यो ।
साथै, ५ हजार १ सय रुपैयाँ साइनिङ अमाउन्ट पनि । उनको पहिलो फिल्म थियो ‘सौगन्ध’ । त्यसको एक बर्षपछि अर्को फिल्म रिलिज भयो, ‘खिलाडी ।’ यो फिल्मले अक्षयलाई वास्तवमै बलिउडको खेलाडी साबित गरिदियो । अब्बास- मस्तानका फिल्म ‘खिलाडी’ अक्षयको पहिलो सुपरहिट फिल्म थियो ।
त्यसपछि उनी मै खिलाडी तु अनाडी, मोहरा, सबसे बडा खिलाडी, मिस्टर एन्ड मिसेस खिलाडी, खिलाडियोअका खिलाडी, दिल तो पागल है जस्ता एकपछि अर्को सुपरहिट फिल्म आयो । एक्सन हिरोको छवी बनाएका अक्षयले सन् २००० मा ‘हेरा फेरी’ फिल्म खेले, जसले उनलाई रोमान्टिकको हिरोको रुपमा चिनायो ।
हेराफेरीको सफलतापछि उनी आवारा पागल दिवाना, मुझसे शादी करोगी, गरम मसला जस्ता कमेडी फिल्ममा अब्बल दरिए । गरम मसलाबाट सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेताको फिल्मफेयर अवार्ड पाएका अक्ष्याले ‘अजनबी’मा निर्बाह गरेको नेगेटिभ रोलबाट ‘बेस्ट भिलेन’ क्याटगोरीमा फिल्मफेयर अवार्ड उचाले ।
बलिउडमा अक्षय खेलाडी नै बनेर उदाए । खासगरी समकालिन अभिनेत्रीसँगको रोमान्सले उनलाई ‘प्ले ब्वाई’को रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । कतिसम्म भने, उनी एकसाथ दुई जना अभिनेत्रीसँग समानन्तर अफेयरमा समेत रहे । जतिबेला उनी रबिना टण्डनसँग अफेयरमा थिए, त्यसबेला शिल्पा शेट्ठीसँगपनि उनको ‘इलु-इलु’ चल्दै थियो । ग्ल्यामर हिरोइन रबिनासँग डेट गर्ने अक्षय यता शिल्पासँग पनि टेडिङको तय गरिरहेका हुन्थे ।
पछि उनको अफेर प्रियंका चोपडासँग पनि रह्यो । तर, यो अफेयर बिवाहपछि भएकाले निकै बिवादित भयो । त्यसो त उनको पहिलो गर्लफ्रेन्ड थिइन, चर्चित मोडल पूजा बत्रा । उनीहरुको इंगेजमेन्टसम्म भएको थियो । तर, करियरको उत्कर्षमा रहेका उनीहरुको सम्बन्ध कसिलो होइन, झन् झन् खुकुलो हुँदै गयो । र, आखिरमा त्यो टुट्यो पनि ।